Semalt: Iifayile zeeWebPress kunye ne-ndash; Eyona nto ibaluleke kakhulu neyaziwayo
Semalt: Iifayile zeeWebPress kunye ne- - Eyona nto ibaluleke kakhulu neyaziwayo
Nangona i-WordPress inikezela ngeetoni zeempawu kunye nokukhethwa kukho, kusekho izixhobo ezininzi ezingekho kwi-core. Indlela efanelekileyo kunye ekhawulezayo yokuzalisa zonke izicatshulwa ezingekhoyo ukuzitholela uhlobo olufanelekileyo lweefowuni. Iiplagizi ze-WordPress zinikeza iintlobo ezahlukeneyo zokukhetha kunye nokwenza ngokwezifiso kwi-webmasters kunye neeblogi. Ngenketho engaphezu kwama-42,000 kwiNcwadi ye-WordPress Plugin, akuyi kuba lula kuwe ukwenza ukhetho olufanelekileyo. Ngoko, apha sineqoqo yeefowuni ze-WordPress zamahhala kunye neepalamum. Ngokuqinisekileyo baya kukunceda ukuba uthathe isayithi ibe yinto elungileyo - spin palace bonus ohne einzahlung.
U-Oliver King, uMphathi wePlayer Success u-Semalt , uthi nakuba ungeyena umcebisi we-ace, unokudala iwebhusayithi yakho usebenzisa le plugin ye-WordPress.
Le iplagin ye-WordPress ehlawulwe ibiza i-$ 80 minyaka yonke kwaye inceda uncedo lokugcinwa kweewebhu kwiiwebhusayithi ezimbini ngexesha elifanayo. Ngenxa yokukwazi ukucwangcisa i-backups nokuthumela iifayile kwisixhobo sokugcinwa kwefowuni esidumile, le iplagin ayiyi kuvumela iifayile zakho zilahleke xa isayithi lakho lingasebenzi kakuhle. Oku kukukunceda ukhethe kwiinketho ezahlukeneyo zokugcina, oku kuthetha ukuba unokukwazi ukuxelela apho ufuna ukugcina ifayile kwiziko lakho lokugcina. Ukususela kwizithuba kunye namaphepha ukuya kumazwana akho kunye nezicwangciso, unokugcina yonke into igcinwe. Ngelixa iinkampani zokubamba zewebhu zihlala zixhasa iifayile zakho, awukwazi ukuzithembela kuzo ngenxa yokukhetha okuncinane. Ukuba awufuni ukuya kunye nePloud Buddy iplagin, ungazama iVaultPress okanye iDuplicator.
2. Ukhuseleko lwe-Wordfence
Inxalenye ephambili kukuba le plugin iyatholakala kokubili kwiinguqulelo zamahhala kunye ne-premium. Ukhuseleko lwe-Wordfence yi-toolkit yesixhobo esisodwa esikhusela isayithi lakho le-WordPress kwii-virus kunye ne-malware..Kwakhona kunceda ukunqanda abahlaseli bamandla abanobuqhetseba kunye ne-firewall eyakhelwe ngokubanzi. Kwiiwebhsayithi ezincinci, inguqulelo yamahhala ye-Wordfence Security ilungile, kodwa kwiiwebhusayithi ezinkulu, inguqulo yayo ehlawulwayo ifanelekile. Unokuthintela ukungena kwi-website yakho esicatshulwayo usebenzisa i-plugin, kwaye ezinye zeendlela zayo ziyi -Themes Security kunye ne-Login LockDown.
3. Iifom zendalo
Ngenye yeeplanzi eziphambili kunye ezidumileyo ze-WordPress zangoku. Ngokubanzi, le iplagiza izakudala iiNxibelelwano zethu zefom. Kwinqanaba eliyinkimbinkimbi, le iplagi iya kufihla kwaye ivelise amasayithi kwindawo yakho ngokuxhomekeke kwindlela abavakashi bakho abayiphendula ngayo. Unokwamkela iintlawulo ze-intanethi, unxuse abasebenzisi ukuba babhalisele uluhlu lwe-MailChimp kwaye wenze imisebenzi efana nale nale iplagin. Inkokhelo ehlawulelwayo ibiza i-$ 39 kwaye ineemithwalo zongeziweyo. Ezinye zeendlela zayo zoQhagamshelwano Ifom ye-7 kunye neFom yoQhagamshelwano olukhuselekileyo.
4. Yabelana ngamaqhosha ngo-AddToAny
Kwiinyanga ezithile, ii-media media sites have become a part of our life. Ngamaqhosha abelo, unokwenza ulungelelwano lwamanqaku eendaba loluntu kwiwebhusayithi yeWindowsPress ngokufanelekileyo. Yinto enokwenziwa ngokwezifiso kwaye iluncedo malunga neenkonzo zayo kunye nezinketho. Kukho iinkonzo ezingaphezu kwekhulu ukubandakanya iindwendwe zakho kwaye ufumane uninzi lweetyelelo kumxholo wakho. Ungakhetha ngokulula ukhetho lwamajelo asekuhlaleni ofuna ukubonisa kwiziko lakho. Ezinye zeendlela ezingcono kakhulu zakwa-Shareaholic kunye neesebenzi zenkxaso nge-AddThis.
5. SEP WordPress
Xa kuziwa kwi-SEO, akukho khetho olungcono kuneYoast. Yona iplani ye-WordPress eyona nto ibhetele kwaye idume kakhulu. Ufumana iimpawu ezinjengekhasi elenziwe ngamaphepha ngeekhepha, kunye neendlela zokumisa. Ungongeza kwakhona i-breadcrumb navigations, i-sitemap ezenziwe ngokuzenzekelayo, izicwangciso zeendaba zoluntu kunye nezinye izinto kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress usebenzisa le plugin ye-SEO. Ezinye zeendlela zayo zithe Zonke kwi-One SEO Pack kunye ne-SEO Ultimate.